Nitohy ny sakoroka teny Vontovorona: notapahina ny jiron’ny mpianatra, mbola niraraka ny lakrimozena | NewsMada
Mihamafana ny grevin’ny mpianatra teny Vontovorona, omaly. Notapahina ny jiron’ny mpianatra. Mbola nitohy ny fandarofana baomba lakrimozena.
Nirefodrefotra ny baomba mandatsa-dranomaso, omaly teny Vontovorona. Tsy nitsitsy ireo mpitandro filaminana fa nahazo baiko amin’ny fanjakana ka manohy ny famoretana ireo mpianatra nitaky ny tombontsoany.
Vao maraina, nametraka sakana teo amin’ny vavahadin’ny sekoly sy teo amin’ny valan’omby ireo mpianatra eny an-toerana. Niatrana vao maraina teny ihany koa ny Emmo/Reg nitondra ireo fitaovana fandravana fitokonana, toy ny kesika maro feno baomba mandatsa-dranomaso.
Nanomboka ny fifampihantsiana teo amin’ireo mpianatra sy ny mpitandro filaminana nony antoandro. Nirehitra ny kodiarana, nanakanan-dalana. Nitora-bato ny mpitandro filaminana ireo mpianatra. Namaly bontana avy hatrany tamin’ny fandefasana baomba mandatsa-dranomaso sesilany koa ny ankilany.
Tamin’izany no naharatrana mpianatra telo sy mpitandro filaminana roa ka samy nifamonjen’ny namany avy. Nosamborin’ny mpitandro filaminana ireo mpianatra telo naratra ireo ary efa navotsony, fotoana vitsy taorian’izany. Tsy nitsahatra raha tsy tamin’ny telo ora hariva ny fifampihantsiana teo amin’ny mpianatra sy ny Emmo/Reg.
Hitohy, anio, ny fitokonana eny Vontovorona, raha ny filazan’ny mpianatra. Tsy hitsahatra izany raha tsy mivoaka ny didy avoakan’ny minisitera, mamerina amin’ny laoniny ny fepetra amin’ny fanaovana “memoire” aorian’ny fianarana.
Tsy mbola eto an-toerana ny minisitry ny Fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa amin’izao fotoana ka miandry ny fiverenany ny vahaolana.
Tsiahivina fa mitaky ny fahalalahan’ny mpampianatra rehetra amin’ny tokony hahazoana manao “encadrement” ireo mpianatra manao “mémoire” ny fitokonan’ny mpianatra. Namoaka didy ny minisitera fa ny mpampianatra manana ny diplaoma “maitre de conference” ihany no afaka manao “encadrement”.
Vitsy anefa ireo mpampianatra manana izany diplaoma izany ka manahy ireo mpianatra fa tsy haharaka ny isan’ny mpianatra izy ireo ka hitarazoka ny fanaovana “mémoire” ary mety tsy ho voaray avokoa ireo mpianatra hanatanteraka izany.